Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » St. Kitts Ugbu a nwere ihe mere e ji eme ememe Cruising
Kitts & Nevis taa na-eme ememe oku mbụ nke Viking Orion, ụgbọ mmiri okomoko nke sitere na Viking Ocean Cruises, nkewa nke Viking Cruises. N'ịkwụsị nkwụsị na nhazi oge oyi 2021/2022, Viking Orion ga-akpọ oge 10 na oge St. Kitts Winter 2021/20-22. Nke a bụ ụgbọ mmiri nke anọ ga-akpọ kemgbe mmalite nke ngalaba ụgbọ mmiri na oku mbido mbụ nke oge 2021/2011. Viking Ocean Cruises bụ ahịrị ụgbọ mmiri okomoko kacha ibu wee bụrụ onye a họpụtara ya na #1 Ocean Line na Condé Nast Traveler's 2021 Readers' Choice Awards.
Viking Cruises bịara St. Kitts maka oge mbụ na oge 2016-17, ya na Oké Osimiri Viking. Kemgbe ahụ, Viking Sky, Viking Star na Viking Sun agaala St. Kitts. Ịnabata oku mbụ nke Viking Orion dị mkpa na ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ, ka njem nlegharị anya na-ewughachi ụwa niile. Honorable Lindsay FP Grant, Minista njem nlegharị anya, njem na ọdụ ụgbọ mmiri, kwuru, "Ọ bụ nnukwu obi ụtọ na anyị na-anabata Viking Orion taa. Nleta a bụ ihe atụ nke mmekọrịta na-aga n'ihu n'etiti Viking Cruises na St. Kitts, ọ na-egosi ntụkwasị obi Viking na St. Kitts ebe ọ na-aga. Malitegharịa ụgbọ mmiri n'ụwa niile chọrọ ka anyị niile nọ na Federation n'akụkụ ha nke mere agadi na ndị ọbịa njem ụgbọ mmiri ọhụrụ nwere ike nweta ọmarịcha ihe nkiri anyị, ọdịbendị siri ike, akụkọ ihe mere eme bara ụba, naanị ezigbo Caribbean.
Mgbe ha nọ n'ọdụ ụgbọ mmiri, ndị njem ga-enwe nhọrọ pụrụ iche, njem nlegharị anya "Njem akwadoro" iji mee ka echiche ha na-awagharị, gụnyere akụkọ ihe mere eme na nke otu ụdị Brimstone Hill Fortress na National Park, Caribelle Batik, ebe usoro ọkụ na-ekpo ọkụ. nke ime akwa batik ka na-eji ma ọ bụ St. Kitts Scenic Railway, nke ikpeazụ na nanị njem ụgbọ okporo ígwè na West Indies. Ndị njem nwekwara ike ịnụ ụtọ ma na-awagharị n'otu n'ime osimiri anyị mara mma, South Friars ma ọ bụ Carambola Beach Club, gaa n'ụlọ French eweghachi nke ọma na Fairview Great House ma ọ bụ nwee ọmarịcha ubi okpomọkụ na Palms Court Gardens. Ndị ọbịa nwekwara ike na-awagharị n'efu na Port Zante ma nwee ọ enjoyụ nka na nka mpaghara sitere n'ahịa Amina Craft na ndị na-ere ahịa Black Rocks ma ọ bụ gaa na ụlọ ahịa azụmaahịa, ụlọ ahịa ihe ncheta, ụlọ mmanya na ụlọ nri na-enye nri mpaghara, Caribbean na mba ụwa.
"Anyị chọrọ ikele Viking Cruises maka mmekọrịta ha bara uru yana maka ịgụnye St. Kitts & Nevis na njem njem nke oge mmalite nke Viking Orion," Racquel Brown, onye isi ụlọ ọrụ St. Kitts Tourism Authority kwuru. Ọ bụ ezie na St. Kitts na-abụkarị ebe ụgbọ mmiri ewepụtara, nleta a dị oke mkpa n'oge ụgbọ mmiri na ebe ndị a na-aga na-arụkọ ọrụ ọnụ iji wughachi ngalaba ahụ n'ihi ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ. Anyị na-atụ anya ịnweta Viking Cruises azụ ma na-atụ anya mmekọrịta anyị na-aga n'ihu ruo ọtụtụ afọ na-abịa.
Viking Orion na-esi na Ft. Lauderdale, Port Everglades na njem njem njem ụbọchị iri na anọ nke St. Kitts bụ ụbọchị nke atọ (14rd).
Ọgwụ ịba ọcha n'anya C na-eji ule nyocha Origami ọhụrụ
Genital Psoriasis: Nsonaazụ nke ọmụmụ ọhụrụ
Ihu gị bụ NJ ọhụrụ gị ịga njem: Biometrics dị mma!
Iwu ọhụrụ maka ndị ọbịa Canada: 10 US ...
Ozi njem njem nke Iberia site na New ...
Azụmahịa na-enye ike ụbọchị nke abụọ nke IMEX America
Jackson Suber: Mmeri dị egwu na White Sands Bahamas NCAA…
Ụgbọ elu New York JFK na-aga Lisbon na TAP Air Portugal ugbu a
Losartan Ọgwụ Ọbara Ọbara dị elu echetara ugbu a
Briten: Wepụ anyị n'ụlọ pụọ na ezumike